Betroka : nahazo tendro ny Cnaps | NewsMada
Betroka : nahazo tendro ny Cnaps
Notokanana, ny herinandro lasa teo ny tendron’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (CNaPS) any Betroka. Nambaran’ny talen’ny Fitantanana, Rakotomila, nisolo tena ny tale jeneraly, fa tafiditra ao anatin’ny politikan’ny fanakaikezana ny olona manan-draharaha amin’ny Cnaps izao. Tsy lany vola sy fotoana mankany amin’ny masoivoho any Ihosy intsony izy ireo.
Ho an’ny mpandrindra ny tendro sy ny masoivoho Cnaps, Rtoa Tsaboto Joslina, “tsy misahana ny ara-bola ny tendro fa vitan’izy ireo kosa ny fikarakarana ny antontan-taratasy rehetra”. Misy ny fiaraha-miasa amin’ny banky sy ny mikraofinansa amin’ny fizarana ny vola fanampiana ara-tsosialy. Miara-miasa amin’ny ivon-ketra kosa amin’ny fandraisana ny fisotroan-dronono.
Miisa 21 ny tendron’ny Cnaps manerana ny Nosy ka ny any Vohemar sisa no tsy notokanana, na efa nisokatra nanomboka ny janoary 2016 aza. Samy manana masoivoho mpiahy avokoa ny tendro tsirairay ka Ihosy ny any Betroka. Masontsivana hametrahana ny tendro ny toerana misy azy, ny sosialy ary toekarena.
Nisaotra manokana ny tale jeneralin’ny Cnaps, Arizaka Rabekoto Raoul, ny depiote voafidy tany Betroka, Randrianasolo Nicolas tamin’ity fotodrafitrasa ity.